निर्मला हत्या प्रकरण: टुट्दैछ नेपाल प्रहरीमाथि जनबिश्वास
Monday, 17 Sep, 2018 2:55 PM
निर्मला पन्तका बुबाआमा यतिबेला छोरीका बलात्कारी र हत्याराको पहिचान र पक्राउका लागि राजधानी काठमाडौंमा छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि सोमबार बिहान भेटेका छन् । प्रधानमन्त्रीले निर्मला आफ्नी पनि छोरी भएको भन्दै हत्यारालाई पत्ता लगाएर सार्वजनिक गरिने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले पदको आडमा यस्ता अपराध गर्ने अपराधीलाई नछाड्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रहरीका अनुसन्धानहरुमाथि शंका लागेर नै टोलीहरु परिवर्तन गरिएको र डीआईजीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानवीन टोली बनाइएको पनि बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि निर्मलाका बुबाआमाले अपराधी पत्ता लाग्ने विश्वास जागेको बताएका छन् । उनीहरुले अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी हदैसम्मको सजायँको माग गरेका थिए । निर्मलाका हत्याराको छानवीन र कारवाहीका लागि सिंगै देश एकिकृत भएको छ । तर डेढमहिना बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नुले भने अपराधीको ‘नेक्सस’ प्रहरीभित्र बलियो देखिन्छ ।
साउन १३ गते निर्मलाको शव भेटिएपछि प्रहरी निरन्तर अनुसन्धानमा छ तर अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन । किनभने प्रहरीले घटनाका सबै प्रमाणहरुलाई नष्ट गर्यो, उसले अपराधीलाई बचाउन चाह्यो । घटना थाहा पाउने सबैभन्दा उच्चतहका प्रहरी अधिकृत कञ्चनपुर एसपी डिल्लीराज बिष्टदेखि शुरुभएको अपराधी बचाउने प्रयास अहिलेसम्म पनि जारी रहेको देखिन्छ । वास्तवमा एसपी बिष्टले नै प्रमाण लोप गराउने कार्यको नेतृत्व गरेका थिए । अहिले पनि प्रहरीले यी बिष्टमाथि अनुसन्धान गरेमा किन उनले प्रमाण लोप गरे ? किन तीन तीन जना निर्दोषलाई अपराधीको रुपमा सार्वजनिक गरे ? प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसपछि बल्ल सरकारले शनिवार सीआईबीका डीएसपी अंगुर जोशी, जानबहादुर सेटी, प्रहरी निरिक्षक एकेन्द्र खड्का, जगदीश भट्ट र असई रामसिंह धामीलाई निलम्बन गर्यो । निलम्बित प्रहरी डीएसपी जीसी सीआईबीका तर्फबाट अनुसन्धानमा संलग्न थिएभने सेटी कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालिन प्रवक्ता थिए । भट्ट वडा प्रहरी कार्यालय, महेन्द्रनगर र खड्का कञ्चनपुर प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत थिए । असई धामी प्रहरी चौकी सालघारीमा इन्जार्च थिए । यी सबैले उनै एसपी बिष्टले जे अराए, त्यो मात्र गरे । अर्थात सबै मिलेर निर्मलाको न्याय समाप्त पारे । त्यसलै यी अपराधी नै हुन् ।
शान्तिसुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि जिम्मेवार ठहर्याइएका प्रहरी अधिकृतहरुनै अपराधी बचाउन लागेको यो घटनाले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व र क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । अपराधीले अपराध गर्यो, त्यो त अपराधी नै भयो, तर यहाँ त प्रहरी स्वमले अर्को अपराध गर्यो, शुरुदेखि नै प्रहरीले अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काम गर्यो ।
अपराधीले अपराध गर्यो, त्यो त अपराधी नै भयो । तर यहाँ त प्रहरी स्वमले अर्को अपराध गर्यो, शुरुदेखि नै प्रहरीले अपराधीलाई संरक्षण गर्ने काम गर्यो । कञ्चनपुर प्रहरीका एसपी डिल्लीराज बिष्टको घटनाप्रतिको रवैया हेर्दा थाहा हुन्छ, अपराधीसँग उनी परिचित छन् । त्यसपछि अनुसन्धानमा संलग्न सबै प्रहरीले बिष्टका सहयोगी भएर काम गरेको देखिन्छ ।
कञ्चनपुर प्रहरीका एसपी बिष्टको घटनाप्रतिको रवैया हेर्दा थाहा हुन्छ, अपराधीसँग उनी परिचित छन् । त्यसपछि अनुसन्धानमा संलग्न सबै प्रहरीले बिष्टका सहयोगी भएर काम गरे । जनआक्रोस प्रहरी हुँदै राजनीतिक नेतृत्वसम्म आइपुगेको छ । संक्षक र योग्य भनिएका प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालको नेतृत्व असफल भएको देखिदैंछ । अनुसन्धानमा संलग्न र प्रमाण मेटाउन संलग्न प्रहरीलाई निलम्बन गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णयमा खनालले फरक मत राख्नुले पनि शंका बढेको छ ।
सरकारले धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली पठाएर अनुसन्धान भइरहेकाले अव त्यसको प्रतिवेदनलाई सबैले पर्खनुपर्छ । टोलीलाई अव थप समय दिनुभन्दा छिट्टो अनुसन्धान टुग्याँउन निर्देशन दिनुपर्छ । अहिलेसम्म जो जो अनुसन्धानमा संलग्न भए, निलम्वन गर्न बाँकी रहेकालाई पनि निलम्बन गर्नुपर्छ । यी प्रहरी अधिकृतहरु प्रहरी सेवाका लागि उपयुक्त छैनन् । त्यतिमात्र होइन, सिंगो प्रहरी वलको उपयुक्त र उचित नेतृत्व गर्न नसकेकाले महानिरिक्षक खनाललाई पनि सरकारले समयसिमासहितको चेतावनी दिनुपर्छ ।